Ogaden News Agency (ONA) – Faallo: Camma iyo Watiiniyo, Cabasiyo Wasaafaad, Caadilkaa lakaashoo, kuciqaab Wayaanaha- Waa gubaabada cusub ee JWXO/ONLF By- Xaaji M/rashiid.
Faallo: Camma iyo Watiiniyo, Cabasiyo Wasaafaad, Caadilkaa lakaashoo, kuciqaab Wayaanaha- Waa gubaabada cusub ee JWXO/ONLF By- Xaaji M/rashiid.
Posted by Daljir	/ January 25, 2018
Marka hore waxaan akhristayaasha sharafta leh usheegayaa inay miiska ii yaaleen diyaarinta maqaalo kala duwan, isagoo xaalku sidaa yahay ayaan daawaday baahintii Ilays TV ee ciidanka xoreynta Ogadenya ee 23 bishan aynu kujirno. Taasi waxay keentay inaan si wayn ugu faraxay aragtida cududa ciidanka gobanimo,doonka, sidaas darteed waxaan go’aansaday inaan dhextaal kadhigo faaladan kuwii kalana dib udhigo. Maadaama oon qoraalo hore kaqoray ciidanka xoreynta ogadenya maanta waan soo koobayaa waxaana karaacayaa muhiimadda aan ujeedo oo kaliya.
Waayahan danbe kooxaha warxumo tashiilku waxay afuufayeen inuuna jirin wax ciidan ah oo ONLF leedahay oo meel ujooga, tasoo ah mid uu guumaystuhu usoo dhiibay canaasiirta uqaabilsan faafinta dacaayadaha beenta ah. Muuqaal baahiyaha Ilays TV oo isagu loolan wayn oo dhanka saxaafadda ah kula jira saxaadaha guumaystaha ayaa soo bandhigay muqaal aan hubo inay saraakiil kusheega wayaanaha iyo gacanyarayaasha Jigjiga u fadhiya ay waxbadan is waydiin doonaan.
Ciidanka geesiyaasha muuqaalkoodu waa mid ay ku diirsadeen inta xorriyadda jecel. Hadaan faalo kooban kabixiyo muuqaalkan udanbeeyay ee Naftood hurayaasha wuxuu ahaa sidan- Waxay marka hore ka koobnaayeen Rag iyo Dumar, waxay ku labisnaayeen dirays isku wada midab ah, Raga iyagu Timaha way gaabsadeen. Sida kale ee lawada ogyahay dumarka ree ogadenya waxay caan ku ahaayeen inayna soo istaagin meesha Ragu joogo, balse ay dacatiyada guumaystuhu ku kalifeen inay Dirayska gashadaan, jiidda horana ka dagaalamaan!. Runtii waxaan ku sigtay inaan ooyo markaan daawaday Gabdhaha ree Ogadenya oo AK47 Ku gaadhan, dhaarna kumaraya inay dalkooda ka nadiifin doonaan maxaysatada Wayaanaha.
Dhanka kale muuqaalka ciidanku wuxuu tusinayay mooralkooda oo aad usarreeya, dardar cusub oo halgameed iyo isku kalsooni buuxda. Waxaa kale oo wajigooda ka muuqatay go’aano dhab ah oo muujinaya inay xornimo goobayaan. Hadaan soo qaato qeyb kamid ah suugaan halgameedii ay jeediyeen waxaa kamid ahaa- Camma iyo Watiiniyo, Cabasiyo Wasaafaad, Caadilkaa lakaashoo, kuciqaab Wayaanaha. Si kasataba ha ahaatee dhoola tuska jabhaddu wuxuu inoo ifinayaa inaan la dhayalsan karin cududda JWXO/ONLF ee maanta, waxaanse leeyahay Maashaa Allaah- Maashaa Allaah.
Halgamaa kasta haku baraarugo- awoodaada oo cadowga latuso waa qeyb dagaalka kamid ah, waxaana la joogaa waqtiigii muuqaalada ciidanka xoreynta dalka si wayn loo baahin lahaa, waana mid utaala cidda ay qusayso. Arintaas waxaa kujira Faa’iidooyin aan lasoo koobi karin, markaad cadow is haysaan. Tusaale- Nabi Muxamed SCW ayaa Saxaabadiisa ku amray inay cududaha qaawiyaan markay Kacbada dawaafayaan, si kufaaro Qureesh ay u arkaan inay yihiin niman jidhkoodu dhisanyahay lana cabsi galiyo.
Waxaan ilaahay SXWT uga rajayn walaalaha Naftood hurayaasha ah inuu u rumeeyo Riyadoodii ay mudada dheer kuusoo taamayeen, taaoo ah aayo katashi buuxa oy uhelaan Dalkooda iyo Dadkooda.